၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအကြို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၁ ဖွဲ့၏ လူမှုကွန်ရက် (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်) စာမျက်နှာများကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီမှ အပြာ‌ရောင်အမှန်ခြစ် အမှတ်အသား (Blue Mark) ဖြင့် အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခင်ကတည်းက ရရှိထားပြီးဖြစ်သော နိုင်ငံရေးပါတီများကိုပါ ထည့်သွင်းရေတွက်လျှင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများကို အတည်ပြုထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ စုစုပေါင်း (၃၆) ဖွဲ့ ရှိပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးသော ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်များကို အောက်ပါတိုင်း အုပ်စု(၃)စု ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ - (၁) ဗဟု/အများစု အနိုင်ရသည့် စနစ်အုပ်စု (Plurality System/ Majority System) (၂) အချိုးကျကိုယ်စားပြုသည့်စနစ်အုပ်စု (Proportional Representation System – PR) (၃) အထက်ပါ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် နှစ်မျိုးအား ရောပြွန်းကျင့်သုံးသည့်စနစ် (Semi-PR or Mixed System) တို့ဖြစ်သည်။
STEP Democracy newsletter for March 2020
Please follow the link below to read/download STEP Democracy newsletter for March 2020. STEP Democracy ရဲ့ မတ်လ newsletter ကို ဖတ်ရှုရန် (သို့) ဒေါင်းလုတ်ရယူရန် အောက်တွင်ပေးထားသည့် link အား နှိပ်လိုက်ပါ။ Here: https://bit.ly/34HhIPG
STEP Democracy ရဲ့ programme တွေထဲမှာ ပြည်သူ့နီတိနဲ့ မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေး သင်တန်းဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းတွေမှာဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အသက် ၁၈နှစ်အထက် လူငယ် လူလတ် လူကြီးပိုင်းတွေ တက်ရောက်ကြတာများပါတယ်။ သင်တန်းတွေမှာ တက်ရောက်သူတွေက ဒီမိုကရေစီ အခြေခံသဘောတရားတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ၊ တာဝန်နဲ့ ဝဋ်တရားတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းတွေ၊ ဒီမိုကရေစီမှာ လူငယ်အခန်းကဏ္ဌ၊ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆိုင်ရာတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဌ စတာတွေကို လေ့လာကြတာပါ။ မတ်လ ၁၃၊ ၁၄ရက်နေ့တုန်းက ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သင်တန်းမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအများစု တက်ရောက် သင်ယူခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိုးမောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း (IDP camp) ကနေ လာရောက်ပြီးတော့ သင်တန်းတက်ရောက်တဲ့ မလဘန်ဆိုင်းမိုင်လည်း ပါဝင် ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ။ ။ ကူးစက်မြန် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID – 19 ဖြစ်ပွားမှုူ အခြေအနေများကြောင့် STEP Democracy ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား ယာယီ ရပ်နားခြင်း။
“STEP Democracy temporarily pauses its activities until the end of April 2020 due to the COVID – 19 outbreak”
For the EU-funded STEP Democracy programme, International women’s day is not only about celebrating what women across the world have achieved so far but also about further promoting women’s rights and women participation in politics in Myanmar. To do so STEP Democracy team participated in Women’s Rights Week, , organized by the French Institute in Yangon between3and6March.
As the 2020 general election is getting closer, establishing dialogues between different stakeholders including pollical parties and Union Election Commission (UEC) in order to support the election successful. In mid-February, the EU-funded STEP Democracy organizedadialogue for Kayah State-based all registered political parties and the UEC asapreparation to the 2020 election.